China နီရဲသော Afrcia စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများအတွက် PPGI သံမဏိကွိုင် | Zhanzhi
အနီရောင် Afrcia အတွက် PPGI သံမဏိကွိုင်
PPGI သံမဏိကွိုင်သည်သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောထုတ်ကုန်ဖြစ်ပြီးမျက်နှာပြင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်း (ဓာတုဓာတ်ပြုခြင်းနှင့်ဓာတုကူးပြောင်းခြင်းကုသမှု) ပြီးနောက်အော်ဂဲနစ်အပေါ်ယံလွှာအလွှာတစ်ခု (သို့) အများအပြားကိုမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ဖုံးအုပ်ပြီးနောက်ဖုတ်ပြီးကုစားသည်။ ဇင့်အလွှာ၏ကာကွယ်မှုအပြင်သွပ်အလွှာရှိအော်ဂဲနစ်သုတ်ဆေးသည်အရောင်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသံမဏိကွိုင်ကိုဖုံးအုပ်ကာကွယ်ပေးသည်။ သံမဏိကွိုင်ကိုသံချေးမတက်စေရန်ကာကွယ်ပေးပြီး ၄ င်း၏သက်တမ်းသည်သွပ်ရည်စိမ်သည့်သံမဏိထက် ၁.၅ ဆပိုရှည်သည်။ ကွိုင်
2.Grade: Dx51d, G550, S350GD အားလုံးဖောက်သည်၏တောင်းဆိုချက်အရ
3. အရောင်: RAL အရောင်သို့မဟုတ်ဖောက်သည်ရဲ့နမူနာအရသိရသည်
4. အထူ: 0.12mm-0.4mm, အားလုံးရရှိနိုင်
၆။ အရှည် - ဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်အရ
8. ကွိုင်အလေးချိန် - ဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်အရ
9.zinc အပေါ်ယံပိုင်း: 20-40g / m2
10.Film: 15/5 um (သို့) ဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်အရ
၁၁။ PE၊ HDP၊ SMP၊ PVDF ဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသောအမျိုးအစား
PPGI သံမဏိကွိုင်သည်ပေါ့ပါးမှု၊ လှပသောအသွင်အပြင်နှင့်ကောင်းမွန်သောအဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ရှိပြီးတိုက်ရိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။
၁။ Polyester (PE) သည်ကောင်းမွန်သောကော်၊ ကြွယ်ဝသောအရောင်များ၊ ကျယ်ပြန့်စွာပုံသွင်းနိုင်သောအပြင်ပြင်ပခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊
ဆီလီကွန်ပြုပြင်ထားသော polyester (SMP) သည်ကောင်းမွန်သောမာကျောမှု၊ ၀ တ်နိုင်မှုနှင့်အပူခံနိုင်ရည်၊ ကောင်းမွန်သောပြင်ပခံနိုင်ရည်နှင့် pulverization ခုခံမှု၊ တောက်ပြောင်မှုထိန်းသိမ်းခြင်း၊
၃။ မြင့်မားသောကြာရှည်ခံနိုင်သည့် polyester (HDP)၊ အလွန်ကောင်းမွန်သောအရောင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်ခရမ်းလွန်ခုခံမှု၊ အပြင်ဘက်တွင်ခံနိုင်ရည်ရှိမှုနှင့် pulverization ခုခံမှု၊
၄။ Polyvinylidene fluoride (PVDF) သည်အလွန်ကောင်းမွန်သောအရောင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ခရမ်းလွန်ခုခံခြင်း၊ အလွန်ကောင်းမွန်သောအပြင်ခံနိုင်မှုနှင့် pulverization ခုခံမှု၊ အလွန်ကောင်းမွန်သောအရည်ပျော်မှုခံနိုင်ရည်၊ ပုံသဏ္goodာန်ကောင်းမွန်မှု၊ ဖုန်ခုခံမှု၊
PPGI သံမဏိကွိုင်ကိုအဓိကအားဖြင့်ကြော်ငြာခြင်း၊ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ အိမ်သုံးပစ္စည်းများ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၊ ပရိဘောဂများနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများတွင်အသုံးပြုသည်။ ကွဲပြားခြားနားသောပတ် ၀ န်းကျင်အခြေအနေများအရအရောင်ခြယ်ထားသောလိပ်များတွင်အသုံးပြုသောသင့်လျော်သောဗဓေလသစ်များကိုရွေးချယ်သည်။ ဥပမာ - polyester-silicon modified polyester, polyvinyl chloride plastisol, polyvinylidene chloride, စသည်တို့။ အသုံးပြုသူသည်ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်းရွေးချယ်နိုင်သည်။
ရှေ့သို့ Afrcia အတွက် ၀.၁၂ မီလီမီတာ Corrugated Gi Galvanized သံမဏိပြားများ
နောက်တစ်ခု: Tools များပြုလုပ်ခြင်းအတွက်သံမဏိ Round Bar
မော်တော်ယာဉ်များအတွက် ZM Zn-Al-Mg အလွိုင်းသံမဏိကွိုင်
G550 Galvalume Aluzinc Coated သံမဏိကွိုင်
၀.၁၂ မီလီမီတာမြှင့်ထားသော Gi သွပ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသံမဏိပြားများ ...
AZ150 Galvalume Aluzinc ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသံမဏိစာရွက်
G330 Hot Dip Gi သွပ်ရည်စိမ်သံမဏိ